Mila fahamatorana sy famatorana… | NewsMada
Vita ny fifidianana, ho hita eo ny vokatra. Na izany aza, lanja miakatra ny fiainana: mila hakana lesona ireo lesoka maromaro tetsy sy teroa. Mila fahamatorana amin’izay: mba hialana amin’izay ny kitsapatsapa, ny fitompoana teny fantatra, ny fandehanana irery amin’izay momba ny fiainam-pirenena iombonana…
Ahoana, ohatra, ny amin’ny lalàm-pifidianana, rehefa vita sy milamina ny amin’izao fifidianana izao? Eny, na ny fifidianana solombavambahoaka aza. Mila mijery lavitra dieny izao amin’izay ho fitondrana vaovao eo. Mba tena hisy tokoa ny hoe fiovana sy fanovana amin’izay asa atao, izay iasana, ny fomba fiasa…
Mandra-pitrangan’izay hitranga aloha, mila fahamatorana sy famatorana koa ireo nandika lalàna amin’izao fifidianana izao: fampiharan-dalàna amin’izay, fanasaziana. Tsy tsara avela na ho vitavita sy tsy hitahita ho azy amin’izao ireny. Sao manjary ohatra ratsy amin’ny ho avy? Na zary fahazaran-dratsy tsy mahafa-bela…
Iza na inona, ohatra, ny tena tompon’antoka amin’ny fahadisoana amin’ny lisitry ny mpifidy? Mila famatorana: fatorana na fifehezana amin’ny lalàna… Mbola hotohizana ihany ve ny tsy fahombiazana amin’izany? Mila fanadihadiana lalina ary fanitsiana sy famaizana fa tsy tokony ho vitavita na odian-tsy hita amin’izao.
Ahoana koa, ohatra, ny amin’ireo mpiasam-panjakana mbola nanao fampielezan-kevitra? Mila fampiharan-dalàna koa… Eo koa ny fampiasana fitaovam-panjakana sy olom-panjakana tamin’izany; eny, na voafidy izy na tsia. Mety ho maro ireo tsy fanarahan-dalàna tamin’iny fifidianana iny, araka ny tatitry ny mpanara-maso.
Anisan’ny miantoka ny fifampitokisana eo amin’ny fifidianana hoe madio sy mangarahara ny fanenjehana araka ny fitsarana izay mety ho tsy fanarahan-dalàna, miantoka ihany koa ny faneken’ny rehetra izay ho voka-pifidianana eo. Tsy vitan’ny fakana lesona hanarenana izay lesoka ny fanatsarana fa mila fampiharan-dalàna.